Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Dalxiiska Seychelles iyo Emirates Airlines waxay martigeliyaan Warbaahinta GCC
Airlines • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta
Seychelles iyo Emirates waxay martigeliyaan Warbaahinta GCC
Iyada oo qayb ka ah iskaashigoodii ugu dambeeyay, Shirkadaha Duulimaadyada Seychelles iyo Emirates ayaa abaabulay safar 3 maalmood ah laga bilaabo Sebtember 26 illaa 29 2021, iyaga oo baranaya wakiilo ka socda warbaahinta warbaahinta GCC ee leh quruxda iyo soo jiidashada Jasiiradaha Seychelles.
Seychelles waxay bilowday olole ballaaran oo dib loogu dhisayo kalsoonida safarka dalka.
Garabka dalxiiska ayaa socdaal isbarasho warbaahineed la yeeshay dhowr warbaahin oo GCC ah.
Banaanbaxa ayaa ahaa diiradda ummaddu ku leedahay hubinta caafimaadka iyo badbaadada dadka soo booqda iyo sidoo kale hawlwadeennada dalxiiska, shaqaalaha, iyo dadweynaha deegaanka.
Weriyeyaasha ka socda Khaleej Times, Gulf News, Emarat Al Youm, iyo Kul Al Usra, dhammaantood waxaa lagu martiqaaday LXR Mango House Seychelles, hudheelka cusub ee raaxada ee Mahé oo ku yaal Anse aux Poules Bleues oo ku taal xeebta koonfur -galbeed ee jasiiradda weyn.
Qayb ka mid ah olole ballaaran si gacan looga geysto dib u dhiska kalsoonida u safra jasiiradaha janada ee Badweynta Hindiya ee aadka u wanaagsan oo muujiya sida ay uga go'an tahay shirkadda duulimaadku inay u fidiso marin-u-helidda goobo tayo sare leh, safarkan is-barasho ee ugu dambeeyay ee warbaahinta wuxuu soo bandhigay qaar ka mid ah badeecadaha iyo waaya-aragnimada ugu wanaagsan ee jasiiradaha isagoo muujinaya xoogga ummaddu ku leedahay hubinta caafimaadka iyo badbaadada martida iyo sidoo kale kuwa ka shaqeeya dalxiiska, shaqaalaha , iyo dadka deegaanka.
Isagoo ka faalloonaya wadashaqaynta, the Dalxiiska Seychelles Wakiilka Dubai, Axmed Fathallah, ayaa yiri: “Xiriirka aan la leenahay shirkadaha duulimaadka Emirates wuxuu ahaa mid sii xoogaystay oo ka sii go’an waqti ka dib. Waxaan mudnaan u leenahay inaan indhaheenna ku aragno meelaha dalxiiska ee layaabka leh ee jasiiradaha, iyo weliba inaan la kulanno caadooyinka dhaqanka iyo quruxda badan ee Seychelles; runti waxay ahayd wax aan la ilaawi karin, waxaanan rajaynayaa inay kuwa kale awoodi doonaan inay iyagana la kulmaan. Iyada oo iskaashigii ugu dambeeyay uu socdo, waxaan sii wadi doonnaa inaan siino isla khibrad shaqsiyeed oo la xasuusto dhammaan kuwa doonaya inay si ammaan ah u safraan. ”
Iskaashiga istiraatiijiyadeed ee u dhexeeya Dalxiiska Seychelles iyo Emirates wuxuu ka kooban yahay ololeyaal warbaahineed oo isdaba joog ah oo inta badan lagu jihaysan yahay gobolka GCC, oo hadda u taagan mid ka mid ah suuqyada isha ugu weyn ee jasiiraddu u socoto.
Khadka Holland America ayaa bilaabay xilli-ciyaareedka Cruise si uu…
Emirates iyo Gulf Air: Tartan dambe ma jiro?